people Nepal » स्थानीय तहको मतगणना सुरु : अहिलेसम्म के-के भयो ? स्थानीय तहको मतगणना सुरु : अहिलेसम्म के-के भयो ? – people Nepal
स्थानीय तहको मतगणना सुरु : अहिलेसम्म के-के भयो ?
कास्कीको मादी गाउँपालिका-१ मा एमालेका उम्मेदवार सुरज गुरूङ प्यानल सहित विजयी भएका छन् । उनलाई ६१२ र काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई ४५९ मत आएको छ ।
रुकुम मुसिकोट नगरपालिका मेयरमा
माओवादीका देविलाल गौतम ४५४
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको पहिलो चरणको मत परिणाम अनुसार
एमालेका देववहादुर खत्रि ५८
माओवादीका हिरा बहादुर थापा ५
रूकुम चौरजहारी नगरपालिका मेयरमा
माओवादीका बिशाल शर्मा १०४
कांग्रेसका बलवीर गोसाइ ५२
एमालेका शेर बबहादुर केसी ४१
मतमा छन् ।
–जाजरकोटमा कुशे गाउँपालिका-९ मा अध्यक्ष सहित कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ । ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहको मतगणनाको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । कालीकोट जिल्लाको कालिका गाउँपालिका बालाचौर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रको आइतबार अपराह्न केही समय स्थगित भएको मतदान कार्य पुनः सुचारु गरी सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुरु
हेटौँडा, १ जेठ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मतगणना आज बिहान ९ः३० बजेबाट जिल्ला समन्वय परिषद्को सभागृहमा सुरु भएको छ ।
सो मत गणना दुई समूहमा विभाजन गरी मत गन्ने कार्य सुरु गरिएको छ । अहिले एक नम्बर वडाबाट मत गणना सुरु गरिएको छ ।१ नम्बर वडामा कुल दुई हजार ८९१ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कुल ८३ हजार ५९७ मतदाता रहेको र ९३ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
त्यसैगरी थाहा नगरपालिकामा पनि मतगणना कार्य आज बिहानबाट सुरु गरिएको मकवानपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
–ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ ।
महाँकाल गाउँपालिका–६ को प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामकृष्ण आचार्यसहित प्यानलनै विजयी भएको हो।
त्यसैगरी, गोदावरी नगरपालिका–१ को वडा प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हरिहर कार्की ८४८ मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन्।
-निर्वाचन आयोगले आइतबार मतदान भएका २ सय ८१ स्थानीय तह मध्ये ७९ वटामा मतगणना भैरहेको जनाएको छ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका मेयर
एमालेका बिष्णुप्रसाद ढकालको मत ३१७
माओबादी(कांग्रेस गठबन्धनका लबसेर बिष्टको मत २५९
एमालेका कल्पना बलामीको मत ३१५
कांग्रेसका खड्ग गोपालीको मत २३९
मतगणना अनुसार एमालेका कान्छा घले ६२७ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका छन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका बिनोद गुरुङले ४६१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा एमालेकी मिंखु गुरुङले ६११ मत प्राप्त गरेर जित निकालेका छन् ।
कांग्रेसकी छिरिङ ओङमा गुरुङलाई ५०४ मत प्राप्त भएको छ ।
यसअघि मनाङको चामे गाउँपालिकामा पनि एमालेका डम्बर बहादुर घले बिजयी भएका थिए ।
९ : ४५ को अबस्था
माओवादी केन्द्रले रुकुम जिल्लाका दुई वटा वडाबाट विजयी सुरुवात गरेको छ ।
बाँफिकोट गाउँपालिका १ र सानीभेरी गाउँपालिका १ मा माओवादीका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिका १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नयाँ शक्तिको संयुक्त प्यानललाई हराउँदै माओवादी केन्द्रले विजयी सुरुवात गरेको हो । संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार कर्णवहादुर मल्ललाई ५० मतले पराजित गर्दै माआवादी केन्द्रका हर्कु मल्ल वडा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
महिला सदस्यमा भने यसअघि नै नेपाली कांग्रेसकी तुली गिरी निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन ।
त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिका १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकवहादुर पुन विजयी भएका छन् । कुल ६ सय ७२ मत खसेकामा माओवादी केन्द्रका पुनले ४ सय ४८ मत प्राप्त गरे भने नेपाली कांग्रेसका खलवहादुर पुनले १ सय ७२ र एमालेका मदन पुनले ८ मत प्राप्त गरे । उक्त वडामा ८ मत बदर भएको छ ।
मुसिकोटमा कांग्रेस अगाडि
मुसिकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस अगाडि देखिएको छ । ८ सय १ मत गणना सकिँदा नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट नगर मेयरका उम्मेदवार महेन्द्र केसी ३ सय ९७ मतका साथ पहिलो स्थानमा रहेका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका माओवादी केन्द्रका देविलाल गौतमले २ सय २७ तथा तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका विमलकुमार पुनले ९६ मत पाएका छन् ।
मुसिकोट नगरापालिका १ र २ को मतगणना चलिरहेको छ ।
जिल्लाका मुसिकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मत गणना सुरु । १ नम्बर वडाबाट गणना सुरु गरियो ।
धादिङ नेत्रावती गाउँपालिका प्रमुख
माओवादीका ठाकुर गुरुङ केन्द्र ४८२
एमालेका दुर्गाकुमार शाक्य २७७
काँग्रेसका टेकजंग लामा ( १६५
माओवादी उर्मिला तामाङ ५३२
एमाले मीना तामाङ २८७
काँग्रेस आशामाया तामाङ १९७
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका मानवहादुर पुनको प्यानल विजय भएको छ ।
गाँउपालिका अध्यक्षमा मानवहादुर पुनले २६९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने महिला सदस्यमा सदस्यमा रामसरी राना २४७ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
त्यस्तै सदस्यमा विजयी हुनेमा भद्री दमाई, कृष्णा राना र चन्द्रवहादुर पुन रहेका छन् ।
आइतबार मतदान भएका स्थानीय तह मध्ये ७१ वटामा मतगणना जारी छ । हुम्ला, डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा भने हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याउने काम भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ गते आइतबार तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २८१ स्थानीय तहका लागि मतदान भएको थियो ।
बिहान ९ : ३० बजेसम्म
सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका
माओवादी केन्द्रका कृष्ण गिरी १८५
कांग्रेस भुपेन्द्रबहादुर चन्द १३४
र एमाले यज्ञ ढकाल ११८
मत पाएका छन् ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका
एमालेका उम्मेदवारले ६० मत पाएका छन् ।
कांग्रेस उम्मेदवारले ४५ मत पाएका छन् ।
माओवादी उम्मेदवारले ४३ मत पाएका छन् ।
राप्रपाका उम्मेदवारले १८ मत पाएका छन् ।
एमालेका उम्मेदवारले ४६ मत पाएका छन् ।
कांग्रेसका उम्मेदवारले ६३ मत पाएका छन् ।
माओवादीका उम्मेदवारले ४१ मत पाएका छन् ।
राप्रपाका उम्मेदवारले १७ मत पाएका छन् ।
ललितपुर कोन्ज्योसो गाँउपालिकामा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ। आईतबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोन्ज्योसो गाँउपालिकामा एमालेका उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले १४४ मतले अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अहिलेसम्म २६३ मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेदवारले ११९ मत ल्याएका छन्। काँग्रेसले भने ८३ मत मात्रै ल्याएको छ।
रसुवाको चार वटा गाउँपालिकामा मतगणना जारी
पार्वतिकुण्ड गाउँपालिका, उत्तगया गाउँपालिका, नौ कुण्ड गाउँपालिका र कालिका गाउँपालिकामा अहिले मतगणना
प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार अहिलेसम्म एक हजार ५ सय ५७ मतगणना सकिएको छ ।
पार्वतिकुण्डमा ३ सय, उत्तरगयामा ६ सय, नौकुण्डमा दुई ५७ र कालिकामा ४ सय मतगणना भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्षः दुई सय ५७ मत गणना भएकोमा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ ।
कांग्रेसका नुर्पु साङ्वो घलेको एक सय ५७, नयाँ शक्ति पार्टीका भूमे लामा ६८ , नेकपा एमालेका विकास तामाङको २८ र स्वतन्त्रका लक्षिन नुर्पु तामाङको ३ मत आएको छ । २२ मत वदर भएको छ ।
कालिका गाउँपालिका अध्यक्षः ४ सय मत गणना भएकोमा प्रमुखमा एमाले अगाडि देखिएको छ । एमालेको सिता कुमारी पौडेलको एक सय २३, माओवादीका उद्धव रिजालको एक सय २२, कांग्रेसका साधुराम पौडेलको ९७, नयाँ शक्ति पाटीका कृष्ण वहादुर तामाङको ४३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका टिका प्रसाद देवकोटाको १ मत आएको छ ।
उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्षः ६ सय मत गन्दा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ । कांग्रेसका उपेन्द्र लम्सालको एक सय ४८, नेकपा एमालेका अशोक घिमिरेको एक सय ६२, नयाँ शक्तिका इन्द्र प्रसाद सापकोटाको एक सय ६४ र माओवादीका मेघनाथ घिमिरेको ५४ मत आएको छ । वडामा भने नयाँ शक्ति अगाडि देखिएको छ ।
पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकामा अध्यक्षः नयाँ शक्तिका बुचुङ तामाङको एक सय ८८, मोआवादीका फुर्पु तेन्जिन तामाङको ४१, एमालेका लाक्पा गोम्वो तामाङको ३७ र कांग्रेसका अविनास तामाङको ४ मत आएको छ । ४ मत वदर भएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ ।
मेयरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले ३६७ मत ल्याएका छन भने एमालेका हरिकृष्ण ब्यञ्जनकारले ३०९ मत ल्याएका छन ।
माओवादी केन्द्रका दिनेश महर्जनले १४८ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवारले ३५३, राप्रपा उम्मेदवारले १९८ र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले १५२ मत ल्याएका छन् ।
बिहान ९ : १५ सम्मको
काभ्रे बनेपा नगरपालिका मेयर
एमालेका लक्ष्मीसिंह बादे १३७
कांग्रेसका राम जोशी १०९
र, माओवादी केन्द्रका भोला अर्याल २१
अध्यक्ष मानवहादुर पुन २६९ मत पाएका छन् ।
महिला सदस्या रामसरी राना २४७
भद्री दमाई २६०
कृष्णा राना २६१
चन्द्र वहादुर पुन २७० मत परेको छ ।
नुवाकोटमा ९ बजेसम्म
तारकेश्वर गाउँपालिका प्रमुख
एमालेका रमेश वस्ती ३९
काँग्रेसका चोकराज शाक्य २९
माओवादीका राजेन्द्र न्यैपाने ०
तादी गाउँपालिका प्रमुख
काँग्रेसका नारायणप्रसाद पाण्डे ३४८
एमालेका कृष्णप्रसाद लामिछाने २८७
माओवादी मानसिंह तामाङ १५४
इश्वरी उप्रेती कांग्रेस ३५६
इश्वरी तामाङ एमाले २९७
गमला श्रेष्ठ माओवादी १२६
नुवाकोट, बिदूर नगरपालिका ९मेयर०
ध्रुब अधिकारी कांग्रेस- १०७
सञ्जु पण्डित एमाले- १५०
लिलानाथ न्यौपाने माओवादी केन्द्र-१४
८ :५० सम्म
सुर्खेत, भेरीगंगा नगरपालिका
माओवादी केन्द्का कृष्णप्रसाद गिरी १०८
कांग्रेसका भूपेन्द्र ब। चन्द्र ५७
र एमालेका यज्ञ ढकाल ४९
८ :४५ सम्म
बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका मेयर पदमा
एमालेका देवकुमार नेपाली २०३
कांग्रेसका अर्जुन शेरचन १७६
राजमोका गौरिश्वर पाण्डे ४८
माओवादी केन्द्रका शेरमान घर्ती ४३
८ : ३० सम्म
ललितपुर महानगरपालिका (मेयर) पदमा
कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन- ३६७ मत आएको छ ।
एमालेका हरिकृष्ण ब्यञ्जनकार- ३०९ मत आएको छ ।
माअोबादीका दिपेश महर्जन- ११२ मत आएको छ ।
मतगणना भएको १ नम्बर वडामा
मत आएको छ ।
मकवानपुर थाहा नगरपालिका मेयरमा
एमालेका बिष्णुप्रसाद ढकालको मत( २४०
माओबादीका लभसेल बिष्टको मत २०५
उपमेयरमा एमालेका कल्पना बलामीको मत १८७
सल्यानमा शारदा नगरपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका र छत्रेस्वरी गाउपालिकामा मत गणनाा शुरु भएको छ ।
दार्मा गाउपालिकाको पहिलो परिणाम आएको छ । दार्मा गाउँपालिकामा अहिले सम्म ३ सय मतगणना गरिएकोमा १ सय ५८ ल्याएर माओबादी केन्द्र अग्रस्थानमा छ
कांग्रेसले १ सय मत ल्याएर दोश्रो स्थानमा छ
राप्रपाले १ र मालेले १ मत ल्याएका छन ।
३ सय मत मध्ये १८ मत बदर भएका छन् ।
नुवाकोटमा काँग्रेसले अग्रता लिएको छ ।
विदुरनगरपालिकाको प्रमु्खमा काँग्रेसका मेयर धुव अधिकारी— १०७ उपमेयर गीता अमात्य—११८
एमाले—मेयर सन्जु पण्डित— १०५, उपमेयर गीता दाहाल १५०
माओवादी केन्द्र—मेयर लिलानाथ न्यौपाने १४, उपमेयर सुभद्रा नेपाल १३
तादी गाउँपालिकामा काँग्रेसका प्रमु्ख नारायण पाण्डे ३४८, उपप्रमुख ईश्वरी उप्रेती ३५६
एमाले प्रमुख—कृष्णप्रसाद लामिछाने २८५, उपप्रमुख—माया तामाङ २९६
माओवादी केन्द्र प्रमुख— मानसिं तामाङ १५४ उपप्रमुख—गमला श्रेष्ठ १२६
शिवपुरी गाउँपालिका काँग्रेसका प्रमुख रामकृष्ण थापा १७८ उपप्रमुख मञ्जु केसी ८२
एमाले प्रमुख पदमप्रसाद उप्रेती ५६ उपप्रमुख मंगलमाया प्रजापति ५४
माओवादी केन्द्र प्रमुख मीनबहादुर तामाङ ६५ उप प्रमुख सुशीला थापा ४६ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका
भूपेन्द्र बबहादुर चन्द्र कांग्रेस ५१
यज्ञ ढकाल एमाले ४७
कृष्णप्रसाद गिरी माओवादी केन्द्र ८९
मनाङको सदरमुकाम चामे गाउँपालिकाबाट एमालेले बिजयी भएको छ । छ । एमालेका लोकेन्द्रवहादुर घले २१४ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका छन् ।
निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसकी अनिता लामाले १७३ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
उपप्रमुखमा भने कांग्रेसका मुनिन्द्रजंग गुरुङ बिजयी भएका छन् ।
बिहान ८ बजेसम्म
नवलपरासी, जेठ १ – गैँडाकोट नगरपालिका र कावासोती नगरपालिकामा मतगणना जारी छ ।
एमाले : २५६
कांग्रेस : २१४
एमाले : २४३
कांग्रेस : २२३
कांग्रेस : ९१
एमाले : ७८
कांग्रेस : ८८
कांग्रेस : ११८
एमाले : १६१
कांग्रेस : १२१
कांग्रेस : ४९९
एमाले : ४२५
कांग्रेस : १६१
एमाले : २९९
कांग्रेस : ६५४
एमाले : ३८१
कांग्रेस : ६६०
एमाले : ३७७
ललितपुर महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार कांग्रेस अगाडि छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा,
-कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन : २१८ मत
-एमालेका हरिकृष्ण ब्यञ्जनकार : १८४ मत
-माओवादी केन्द्रका दिनेश महर्जन : ८३ मत